Ungasabalalisa Kanjani I-single-Walled Carbon Nanotubes Ngayinye - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-Carbon Nanotubes ene-Single-Walled (SWNTs noma i-SWCNTs) enezici eziyingqayizivele, kodwa ukuyiveza kumele ihlakazeke ngayinye. Ukuze usebenzise ngokugcwele izici eziyingqayizivele ze-carbon nanotubes ene-single-walled, ama-tubes kumelwe aphikisiwe ngokuphelele. I-SWNT njengamanye ama-nanoparticles abonisa ukukhanga okukhulu kakhulu, ukuze kusetshenziswe inqubo enamandla futhi ephumelelayo ukuze kusetshenziswe i-deaggomerom kanye nokuhlakazeka okuthembekile. Ngenkathi amasu avamile okuxuba anganiki amandla okudinga ukuxosha ama-SWNT ngaphandle kokuwalimaza, amandla amakhulu aphezulu avezwa ukuxuba futhi ahlakaze i-SWCNTs. Ama-ultrasound generated cavitational shear forces anamandla okwanele ukunqoba amandla okubambisana, kanti ukuqina kwe-ultrasound kungalungiswa ngokunembile ukugwema umonakalo we-SWCNTs.
I-Carbon Nanotubes ene-Single-Walled (SWCNTs) engafani ne-Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWNTs / MWCNTs) ngamagesi awo kagesi. I-band gap ye-SWCNTs ingahluka kusuka ku-zero kuya ku-2 eV futhi ukuqhuba kwayo kagesi kufaka ukuziphatha kwe-metallic noma kwe-semiconducting. Njengoba i-Car-Nanotubes eyi-Single-Walled ne-Nanotubes ihlangene kakhulu, enye yezingqinamba ezinkulu ekucubunguleni i-SWCNTs yinto engabonakaliyo yamatayipi kumakhemikhali noma emanzini. Ukuze usebenzise amandla okugcwele we-SWCNTs, inqubo elula yokuthembeka, ethembekile futhi engahleleki ye-tubes iyadingeka. Ikakhulukazi, ukusebenza kwezindonga zangasese ze-CNT noma iziphetho ezivulekile ukudala isikhombikubona esifanele phakathi kwe-SWCNTs kanye nemiphumela yokusungulwa kwezinto eziphilayo ekugqibeleni okuyingxenye ye-SWCNTs, kuphela. Ngakho-ke, ama-SWCNTs ahlakazeka kakhulu njengezibopho kunamalobo angasetshenzisiwe ngabanye. Uma isimo ngesikhathi sokusabalalisa sinzima kakhulu, i-SWCNTs izofinyelelwa ukuze ibude phakathi kwama-80 kuya ku-200nm. Ngeziningi zokusebenza eziwusizo, okusho ukufundisa nge-semiconducting noma ukuqinisa i-SWCNTs, lobude buyingcosana.
I-ultrasonication iyindlela ephumelela kakhulu yokusakaza kanye ne-deagglomeration ye-Carbon Nanotubes, njengoba amagagasi e-ultrasonic of high intensity ultrasound akhiqiza cavitation ku iziphuzo. Amagagasi omsindo asakazwa emithonjeni yemithombo yetshezi ekushintsheni ukucindezela okuphezulu (ukucindezela) nokujikeleza okuphansi (ukungavamile), ngamanani kuye ngokuthi imvamisa. Ngesikhathi umjikelezo ophansi ocindezelayo, amagagasi aphakeme kakhulu e-ultrasonic enza ama-bubbles amancane avulekile noma aphuma emanzini. Lapho ama-bubbles athola umthamo lapho bengakwazi khona ukuwuthola amandla, awela phansi ngesihluku phakathi nomjikelezo ophezulu wokucindezela. Lokhu kwenzeka kuthiwa yi-cavitation. Phakathi nokushisa okuphezulu kakhulu (cishe 5,000K) kanye nezingcindezi (cishe 2,000atm) kufinyelelwe endaweni yangakini. I-implosion ye-bubble cavitation nayo ibangele ama-jets ahlanzekile angama-280m / s velocity. Lezi zimfucumfucu ze-jet eziphuma ku- cavitation ultrasonic, unqobe amandla okubambisana phakathi kweNanbonubes yeCarbon ngakho-ke ama-nanotubes agcwele amandla. Ukwelashwa okuncane okulawulwa yi-ultrasonic kuyindlela efanele yokudala ukumiswa okwesikhashana kwe-SWCNTs ehlakazekile. Ngokukhiqizwa okulawulwa kwe-SWCNTs, ama-processor ultrasonic ase-Hielscher avumela ukusebenza ku-wide range of parameters ye-ultrasonic. I-amplitude ye-ultrasonic, ukucindezelwa kwamanzi kanye nokwakheka kwamanzi kungenziwa ngokuhlukahluka ngokulandelana kuya kokuqukethwe okuqondile nenqubo. Lokhu kunikeza amathuba okushintsha okuguquguqukayo, njengokuthi
Ngaphezu kwalokho, i-ultrasonication njenge-polymer-basizwa ukuhlanzwa indlela ivumela ukususa ukungcola kusuka kwi-SWCNTs esekhulile, ngokuphumelelayo. Kunzima ukutadisha ukuguqulwa kwamakhemikhali we-SWCNTs ezingeni lemangqamuzana, ngoba kunzima ukuthola ama-SWNTs ahlanzekile. I-SWCNTs esekhulile iqukethe ukungcola okuningi, njengezinhlayiya zensimbi nama-amorphous carbons. I-ultrasonication ye-SWCNTs kwisisombululo se-monochlorobenzene (MCB) ye-poly (methyl methacrylate) i-PMMA elandelwe ukuhlunga kuyindlela ephumelelayo yokuhlanza i-SWCNTs. Le ndlela yokuhlanza i-polymer ivumela ukukhipha ukungcola kusuka kwi-SWCNTs ekhulile. Ukulawulwa okulungile kwe-ultrasonication amplitude kuvumela ukugwema noma ukunciphisa ukulimaza i-SWCNTs.
Ukuhlakazeka kwama-ultrasonic wama-nanotubes (UP400S)
Amaqiniso nge-SWNTs– ububanzi be-approx. I-1 nm, enezikhathi eziphindwe izikhathi eziyizigidi zamathambo– amandla amakhulu & ukuqina– ukuqina okukhulu kakhulu– ukuziphatha okuphezulu kakhulu kwe-elektroniki nokushisa– ukuziphatha kwe-metallic noma kwe-semiconducting
Ichitha i-CNTs ngedivayisi yebhu ye-Hielscher UP50H
I-Hielscher inikeza ukusebenza okuphezulu amaprosesa ase-ultrasonic ukunikezwa kwayo yonke imibhalo. Amadivaysi e-ultrasonic avela kuma-watts angu-50 kuya ku-16.000 watts, angasetha kumaqoqo, avumela ukuthola i-ultrasonic efanelekayo kwesicelo ngasinye, kulabhu kanye nasembonini. Ngokusabalalisa okunamandla kwama-nanotubes, kunconywa i-sonication eqhubekayo. Ukusebenzisa amaseli we-Hielscher's flow flow, kungenzeka ukuba usakaze i-CNTs zibe iziphuzo ze-viscosity ephakeme njenge-polymers, i-viscosity ephezulu ne-thermoplastics.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokusabalalisa nokuguqulwa kwama-nanotubes nge-high-power ultrasound!
zezimboni processor ultrasonic UIP16000 (16kW) ukuhamba kwemifula ephezulu